The Tough Journey ofaProfessional Photographer | Myanmar Business Today
HomeFeaturedThe Tough Journey ofaProfessional Photographer
The Tough Journey ofaProfessional Photographer
By Phyo Thu /Myanmar Business Today
There are people who make their way in life by maintainingasingle-minded spirit in pursuit ofagoal. Successful people have suchaspirit.
There are many people who work to become successful by buildingahobby, skillset or artistry. Only those, who manage to break through the difficult roads, setbacks and continue to reject the urges to give up and abandon their dreams, can make it.
Inaremote village, thirty-two years ago, an eight-year old boy started to follow his dreams. Two decades later, the boy has grown into an internationally recognized photographer. Nowaleading photographer of domestic scenes,arecipient of numerous awards, and alsoaphotography teacher and president of the Myanmar Photographer Association. His name is U Kyaw Kyaw Win.
One day, while in the fourth grade, an old Olympus camera owned by Win’s grandfather caught his eye. He wanted to touch and play with the old camera. But he had to earn this privilege by working on the family farm or by selling things. At this point of his life, he thought takingaphoto was as easy as pressing the button of the camera. He learned differently when he went to the photo printing shop and heard the shop owner’s words.
“My grandfather’s camera was manual. I thought if I just shot, I would getapicture. But when I went to the photo printing shop, the shop owner said, ‘If pressingabutton gives youapicture, I would abandon my career asaphotographer’. It inspired me. When I got home, I took the camera apart into pieces so that I would know how to takeapicture. I lostacamera, but knew nothing about taking pictures,” he said.
Losingacamera made him realize that pressingabutton doesn’t result in the big picture. Sometime later, he asked his father foracamera. Surprisingly, his parents were so supportive that they bought him his first professional Seagull KJ1 camera.
“That camera changed my life. Fortunately, I liked reading. I knew that I could only get the knowledge I needed from books as there was no one to teach me. So, I looked for books on photography each time I went to the nearby city of Magway. I started taking pictures by reading the book Colorful Photography, translated by Takatho Chit Swe, although it only had two pages dedicated on how to take pictures.” He was nine then.
It would be hard for any kid, with no access to formal training to becomeapaid photographer. However, he was fortunate whenastudent coming back from the city taught him how to take still pictures.
“At first, people did not think suchayoung kid would be able to take quality pictures. But they accepted after seeing my work”, he reminisced.
However, he stopped his career asaphotographer at the age of seventeen when he was in tenth grade. Exams were more important than anything else in Myanmar’s society which placesahigh value on education. So, there was no chance forastudent to work asaphotographer while preparing for an exam. Unfortunately, he and his camera parted ways.
“I sold my camera toafriend and stopped taking photos,” he recalled the time away from his beloved camera.
Fortunately for him, his father, determined to support his passion, decided to send him toatraining class organized by the Myanmar Photographers Association. His father gave him the annual agricultural loans provided to farmers so that he could attend the photography class.
“It was my first time to Yangon. I went to the class looking at the road signs. To my shock, the fee was K5,000. That’s what my father gave. Then, the president of the association gave mearecommendation saying, ‘You’ll have to pay back’. So, I was allowed to attend the class,” he recalled his financial struggles. Today, he isatrainer at that very class he first attended.
The environment gave everyone an opportunity to learn and gain experience. After attending the class, the boy who used to take still pictures hadanew vision on photography. But he neededatool to employ his newly learned techniques. It wasagood camera.
“I didn’t haveacamera when I attended the photography class. I didn’t attend the later session when students were required to take practical shots. So, I didn’t getacertificate butaletter of course completion,” he said.
Given the income ofafamily around 1998, owningacamera was not easy. Only well to do people and aspiring photographers ownedacamera. While in Yangon, he would go and look longingly at cameras every time he was in the downtown area. When he returned home, he returned with thoughts ofaNikon FM10 camera.
“When I was leaving Yangon, I visited old bookstores and boughtalot of books on photography,” he reminisced.
“However, when I got home, my parents and I got intoafight. So, I talked to no one. I just stayed upstairs alone. In our place, the upstairs is used only for storing crops. It was hot and uninhabitable upstairs. But I stayed; I only went downstairs occasionally but never visited the village. I just read the books I has bought. I was so upset and shouted sometimes. People in my village thought I had lost my mind,” he laughed.
As is the case at times, such events are funny when called to mind in retrospect. But life was hard. Life in undeveloped areas was harder. For an ordinary farmer, buyingaK250,000 camera was not possible, unless he had faith in his son. Finally, he got what he wanted.
“At last, my father thought, ‘My son is losing his mind. I need to do something’. He asked me what I wanted. I said I wantedacamera and he bought it for me. Unfortunately, my father’s farms produced less than expected because of pests. My mother and I visitedanearby city and bought the camera. We talked about it at length atatea shop,” he said.
Giving himacamera made him even more enthused about photography. He took pictures of everything he saw: people carrying water buckets, cattle at the pasture, children playing, and so on.
He passed the matriculation exam with good credits. He was allowed to attendaTechnological University. But he did not immerse himselfagreat deal into education. He married, settled in Hlaingtharyar Township, Yangon, and openedaphoto studio. It was at this point that photography became his career rather thanapassion. He decided to work asaphotographer even though he graduated. He competed ataphoto contest and won. Then, he foundanew platform for his photography – the internet.
“I looked for competitions and competed. What I am now is because of the internet. My first international award wasaphoto contest held in Korea. I did not receive cash but was rewarded withamedal. I won the award with my family photo. Then, I wonaseries of awards,” he said.
“I received my first cash prize ataphoto contest organized byaJapanese company in Thailand. The photo wasapicture ofafisherman spreading his fishing net near the U Bein bridge,” he explained.
At first, he imitated local photographers’ work while competing at the international photo competition. His pictures of Myanmar’s unique scenes helped him win award after award.
“When I traveled to Inle Lake to take photos, it was in the morning and the water of the lake was like liquid gold because of the mist and the rays from the rising sun. I couldn’t take the picture at the time as I was not prepared. I waited for the next morning. I couldn’t sleep well worrying if I would see another setting like this. But I was lucky and witnessed it the next morning. So, I took fishermen and prepared the setting for my photos. Thanks toabridge at my hotel, I was able to capture high angle photos. They earned me more than ten awards. As far as I know, there was no one who had taken such photos before me,” he proudly explained.
He got his first digital camera from winningalucky draw, which was held for those who were voted among the award-winning pictures. Then, he boughtaNikon D 200 camera by exchanging his lucky draw camera and additional cash. Now he is the Fuji’s brand ambassador for Myanmar and an X Photographer. He is also working asaphoto tour guide partnering with the international tour company Luminous Journey.
“Today, beingaphoto tour guide isawell-paying job. Even higher thananormal tour guide; many normal tour guides have changed their career to photo tour guides,” he said.
The boy, who took his grandfather’s camera apart into pieces, is now creating art with his camera and bringing peace through his photos. The rough life has ended for him. But his journey of learning remains unending. He continues his career asaphotographer and enjoys competing at international photo contests.
“Life is short. Now, I can do what I want, without harming anyone else. I love everything about photography – whether taken byaphone or camera. If you want to improve your photography skills, you need to take photos in addition to attending photography classes. Photography is deep. I still need to learn to takeaphoto from my style to make it differ,” said Ko Kyaw Kyaw Win.
In addition to photography, Ko Kyaw Kyaw Win loves writing. He writes articles on photography in magazines and on his Facebook page as well. The stories behind his award-winning photos are must-read and informational. You can read it at https://www.facebook.com/xpotographer/.
ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ရွတ်ရွတ်ချွံချွံလုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာမဆို ရှိတတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေမှာလည်း အဲဒီလို စိတ်တွေထားတတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဝါသနာ ၊ စိတ်ခံစားမှု ၊ အနုပညာ ၊ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင် ပျိုးထောင်ပြီး လောကကို ကောင်းကျိုးပြုနေကြသူတွေ အများကြီးပါ။ ခက်ခဲတဲ့လမ်းတွေ၊ ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ အတားအဆီးတွေ၊ လမ်းခု လတ်ရောက်မှ လှည့်ပြန်ချင်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ၊ စိတ်ကူးထားတဲ့ ရပ်တည်မှုတွေကို မြေလှန်ပစ်ချင်တဲ့အတွေးတွေ အထပ်ထပ်အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ကြားက ကိုယ့်အလင်းကိုယ်စွဲပြီး တိုးထွက်နိုင်ကြတဲ့ သူတွေသာ ကိုယ်ရချင်တဲ့ဘဝရဲ့ ပုံကိုဖန်တီးနိုင်တတ်ကြတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၂ နှစ်ကျော်လောက်က ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ ေ၀ဝါးနေတဲ့အိပ်မက်လေးနဲ့ ရပ်တည်ချက်လေး တစ်ခုကို လိုက်ရင်း ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ကျခဲ့ရတယ်။ မြို့ပြနဲ့ဝေးတဲ့ခေါင်တဲ့ဒေသတစ်ခုက ကလေးတစ်ဦးက ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်အကြာမှာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံတကာဆုတံဆိပ်တွေအများကြီးရခဲ့တဲ့ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းရဲ့ သင်တန်းနည်းပြတစ်ဦး၊ အသင်းရဲ့ လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါ တာဝန်ယူနေပါပြီ။ သူနာမည် ဦးကျော်ကျော်ဝင်းပါ။ သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီး မေးသမျှကိုလည်း ဖော်ဖော်ရွှေရွေနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
လေးတန်း ကျောင်းသားဘ၀ ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာ အဖိုးဖြစ်သူဆီမှာရှိတဲ့ Olympus ကင်မရာအဟောင်းလေးတစ်လုံးကို မျက်စိကျမိရာက ကင်မရာကို စမ်းကြည့်တဲ့ အကျင့်လေးစရခဲ့တယ်။ ဒီကင်မရာလေး အဖိုးက ကိုင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်လည်း ယာလုပ်၊ ဈေးရောင်းပြီးတော့မှ ရခဲ့တာ။ ပုံရိုက်ရင် တစ်ခါတည်းထွက်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီကလေး တစ်ယောက်ရဲ့အတွေးနဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်သွားကူးတော့ သူရဲ့စိတ်ကို ဆိုင်က ဓာတ်ပုံဆရာက စွပေးလိုက်သလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။
“ကျွန်တော့်အဖိုးပေးတဲ့ ကင်မရာက အဲဒီခေတ်ကဆိုတော့ လုံး၀ Manual ကြီး၊ ကျွန်တော်က ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပုံထွက်မှာပဲ ထင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်သွားကူးတော့ ဆိုင်ရှင်က ကင်မရာရိုက်တိုင်း ပုံထွက်ရင် ငါဓာတ်ပုံဆရာ လုပ်မစားတော့ဘူးလို့ပြောတာ၊ အဲဒီစကားက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို စွပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်အများကြီး သိအောင်ဆိုပြီး၊ အိမ်ရောက်တော့၊ ကင်မရာကို တစ်စစီဖြုတ် လျှောက်ကြည့်တယ်၊ နောက်ဆုံးကင်မရာသာ တစ်စစီဖြစ် ပြန်မတပ်တတ်တော့ဘဲနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာကို ဘာမှ မသိလိုက်ရဘူး” လို့ ဆရာကျော်ကျော်ဝင်းက ကလေးဘ၀ အမှတ်တရကို ပြောပြပါတယ်။
ဒီလို အပြောခံခဲ့ရတာကပဲ သူ့အတွက် အသိတစ်ခုရရှိခဲ့သလို ဖြစ်ခဲ့သလို အဖိုးရဲ့ကင်မရာကတော့ သုံးဖို့လည်း မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေတစ်ခု ရောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက် အဖေကို ပူဆာတယ်။ ကင်မရာတစ်လုံးရလာခဲ့တယ်။ ခလုတ်နှိပ်လိုက်တိုင်း ဓာတ်ပုံမထွက်ဘူးဆိုတာကိုပဲသိတဲ့ကလေး တစ်ယောက် ကို Professional Seagull KJ1 ကင်မရာတစ်လုံး ချပေးခဲ့တဲ့အထိ မိဘရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတော့ မယုံနိုင်အောင်ပဲ။
“ အဲဒီ ကင်မရာလေးက ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်က တစ်ခုကံကောင်း တာက ငယ်ငယ်က စာဖတ်တယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့နီးစပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မရှိတဲ့အတွက် စာအုပ်ထဲကမှ သိမယ်ဆိုတာကို သိတယ်။ အဲဒီတော့ မကွေးရောက်တိုင်း သွားနေကျ စာအုပ်ဆိုင်သွားပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကို လိုက်ရှာတယ်။ အဲဒီမှာ တက္ကသိုလ်ချစ်ဆွေရေးထားတဲ့ ဘာသာပြန်တဲ့ ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံပညာဆိုတာမှာ နှစ်မျက်နှာ လောက်ပဲ ပါတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပုံအကြောင်းကို လိုတာလေးကြည့်ပြီး ရိုက်ခဲ့တယ်” လို့ ကိုးနှစ်အရွယ်က အကြောင်း ကို ကိုကျော်ကျော်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
ကိုးနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်က နည်းပညာနဲ့ အခွင့်အလမ်းမပေးတဲ့ခေတ်နဲ့ ဒေသတစ်ခုမှာရှိနေပေမယ့် ပွဲလမ်းတွေထိ လိုက်ရိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးဓာတ်ပုံသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ သူ့အတွက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင် ရခဲ့လားလို့ ပြောရမလိုပဲ။ ရွာထဲမှာ မြို့ကိုကျောင်းသွားတတ်တဲ့အသိတစ်ယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှှုနဲ့ ပုံသေဓာတ်ပုံရိုက် နည်းတချို့နဲ့ လူလက်ခံလောက်တဲ့ ပုံမျိုးကို ရိုက်နိုင်လာခဲ့တယ်။
“ အစကတော့ လူတွေကမယုံကြဘူးပေါ့၊ ကလေးက ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ ရိုက်လို့ရရော ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့၊ နောက်မှ ကျွန်တော်ရိုက်တာကြည့်ပြီး လက်ခံလာကြတာ” လို့ ပွဲအလှူအတန်းတွေမှာ ငယ်ငယ်က လိုက်ရိုက် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီလိုပုံတွေလိုက်ရိုက်နေရင်း ဆယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် အသက် (၁၇) နှစ်လောက်မှာ ဓာတ်ပုံနားလိုက်ပါတယ်။ ပညာရေးကို လိုလားတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအရ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။ အခုခေတ်မှာအထိလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ ကင်မရာတစ်လုံးပိုက်ပြီး တဖက်တလမ်းကရပ်တည်ဖို့က ကျောင်းသားမှာ အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဖေဝယ်ပေးတဲ့ ကင်မရာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။
“ ကင်မရာကို သူငယ်ချင်းကို ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ပေးလိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံလည်းမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး”လို့ ကင်မရာနဲ့ဝေးခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကို ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သားဖြစ်သူရဲ့ ဝါသနာကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ အဖေက ဆယ်တန်းပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းကသင်တန်းကို အပ်ပေးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာက သူ့အတွက်လမ်းမကြီးတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့တာပါပဲ။ သင်တန်းကြေးကိုတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ တောင်သူတွေကို နှစ်စဉ်ပေးတဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနဲ့ ရန်ကုန်ကိုလာဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
“ ရန်ကုန်ကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တာဖြစ်တော့ သင်တန်းနေရာကလည်း သေချာမသိတဲ့ကြားက လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကြည့်ပြီးလာခဲ့ရတာ။ သင်တန်းရောက်တော့ သင်တန်းကြေးက ငါးထောင်ဆိုတော့ သေရော၊ အိမ်ကပေးလိုက်တာ ငါးထောင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်မှ ဥက္ကဋ္ဌကထောက်ခံပေးတယ်။ မင်း နောက်တော့ ပြန်ပေးနော်ဆိုတာနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာ”လို့ သင်တန်း တက်ဖို့အတွက် မကွေးသားတစ်ယောက် ငွေရေးအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြောပြပါတယ်။ အခုတော့ သူနည်းပြအဖြစ်တာဝန်ယူနေတာလည်း သူတက်ခဲ့ရတဲ့ သင်တန်းမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုက အတွေ့အကြုံနဲ့ တတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေးလေ့ရှိတယ်။ ရွာမှာ ပုံသေရိုက်နည်းနဲ့ ရိုက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် သင်တန်းတတ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာ ဓာတ်ပုံပညာအပေါ် မြင်တဲ့အမြင်တွေက ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲလာတာပါပဲ။ မပွင့်တော့တဲ့ တံခါးချပ်တွေကို ဆွဲဖွင့်မိသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတံခါးတွေကို ဖွင့်ရတဲ့ အင်အားတော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်ဝင်းအတွက်လည်းပဲ ဒီအင်အား တစ်ရပ်လိုပါတယ်။ အဲဒါက တကယ့်လိုအပ်ချက် ကင်မရာကောင်းကောင်းတစ်လုံး ပါ။
“ သင်တန်းတက်တော့ ကင်မရာ မရှိဘူး။ သင်တန်းက အကျိုးရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းလက်တွေ့လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကျတော့ ကျွန်တော် မတက်ဖြစ်တော့ဘူး။ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ပဲရတယ်။ အောင်လက်မှတ်မရဘူး ” လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
မပွင့်လင်းတဲ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့ သာမန် မိသားစုတစ်စုရဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေအရ အဲဒီ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ကင်မရာ တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ တတ်နိုင်လို့ အပိုဝယ်တာသူနဲ့ အမှန်တကယ်ပညာကို လေ့လာချင်သူတွေလိုလောက်သာ ရှိကြပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်ဝင်းက ရန်ကုန်မှာနေတုန်းမြို့ထဲရောက်တိုင်း သဘောကျတဲ့ ကင်မရာလေးတစ်လုံးကို ကလေးတစ်ယောက်လို့ သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ရွာပြန်တော့လည်း Nikon FM10 ကင်မရာလေးကို စိတ်ထဲစွဲပြီးပြန်သွားပေမယ့်၊ အဲဒါလေးကို လိုချင်စိတ်က ပျောက်မသွားခဲ့ဘူး။
“ ရွာပြန်တော့ ရှိသမျှပိုက်ဆံနဲ့ပန်းဆိုးတန်းနားက စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေ သွားပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးဝယ်သွားတယ်”လို့ သူ့အပြန်ခရီးစာအုပ်ထုတ်ပိုက်ပြီးသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။
ဆရာ ကျော်ကျော်ဝင်းနဲ့ စကားပြောတော့ တရင်းတနှီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းပြပါတယ်။ သူက စကားပြောမြန်ပေမယ့် သူ့ဘဝကို နားထောင်ရတာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆန်တဲ့ အိန္ဒိယဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ကြည့်ရသလိုပါပဲ။ တကယ့်ဘဝတစ်ခုကတော့ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ ။ နာရီပိုင်းလောက်ပဲကြာတဲ့ ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး ။
“ ရွာပြန်တဲ့နောက်မှာ အိမ်နဲ့လည်း စကားများနေတဲ့ အချိန်၊ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောဘူး။ အိမ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာပဲ တစ်ယောက်တည်း နေတယ်။ အညာမှာက အပေါ်ထပ်ဆိုတာ သီးနှံတွေထားဖို့ လုပ်ထားတာ။ လူနေလို့မရအောင် အရမ်းလည်းပူပေမယ့်တစ်ယောက်တည်းနေတယ်။ ခဏတဖြုတ်အိမ်အောက်ကို ဆင်းလာတယ်။ ရွာထဲကိုလည်း မသွားတော့ဘူး။ ဝယ်သွားတဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းအလိုမကျ။ တစ်ခါခါအော်ဟစ်နေတတ်တော့ ရွာက လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ရူးသွားပြီလို့ ထင်ကြတာ။ တကယ်အဲဒီလိုထင်ကြတာ”လို့ သူ့ဘဝမှာ ပတ်ဝန်းကျင်က မှတ်ချက်ပေးကြတဲ့အကြောင်းကို ရယ်ရယ်မောမော ပြန်ပြောပါတယ်။
တစ်ချိန်က အထင်အမြင်ဆိုးတွေက သေချာကျော်ဖြတ်တဲ့နောက်မှာ သူ့လိုပဲ ရယ်စရာလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ ဘဝက ခက်ခဲပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်မရှိတဲ့ ခေတ်က အခွင့်အလမ်းမဲ့တဲ့ ဘဝတွေကတော့ ပိုပြီး ခက်ခဲပါတယ်။ သာမန်ယာစိုက်တဲ့ မိသားစုတစ်စုအတွက် သူလိုချင်တဲ့ နှစ်သိန်းခွဲတန်ကင်မရာရဖို့ တော်ရုံ သားသမီးကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလိုချင်တာလေးရခဲ့တဲ့ အတိုင်းရလာခဲ့ပါပြီ။
“ နောက်ဆုံးအဖေကပဲ ငါ့သားလေးတော့ မရတော့ဘူး။ တစ်ခုခုလုပ်ပေးမှရတော့မယ်လို့ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကို မေးတယ်။ ကင်မရာလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့ ဝယ်ပေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနှစ်က သီးနှံက ပိုးကျတော့ ဈေးသိပ်မရဘူး။ မရရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အမေ မြို့တက်ပြီး ဝယ်ခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အများကြီးဆွေးနွေးဖြစ်သေးတယ်” လို့ မှတ်မိသေးတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြောပြတာ မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ကင်မရာရပြီးတဲ့နောက် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသံက ပိုဆိုးသွားတယ်။ မြင်မြင်သမျှ ရွာထဲ ရေခပ်ဆင်းတာ၊ နွားကျောင်းတာ၊ ကလေးတွေဆော့နေတာကအစ ကင်မရာတစ်လုံးကိုင်လျှောက်ရိုက်တဲ့သူ့ကို ရွာကသူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပိုဆိုးသွားစေပါတယ်။
“ ကင်မရာရှိကာမှ ကျွန်တော့်ကို လူတွေက ပိုပြီး ရူးသွားပြီးထင်ကြတာ။ ကျွန်တော့်အဖေဘက်က အမျိုးတွေဆို ကျွန်တော့်ကို စကားကို မပြောတော့ဘူး။ ကလေးလို အလိုလိုက်တာ၊ အရူးဘုံမြောက်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြတာ” လို့ အတိတ်ကို လွမ်းစရာကောင်းအောင် ရှင်းပြပါတယ်။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ခဲ့တဲ့နောက်၊ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကျော်ကျော်ဝင်းက အဲဒီခေတ်ပညာရေးကို သိပ်ပြီးပုံအပ်ဖို့အထိ မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းတက်နေရင်း အိမ်ထောင်ကျ ၊ လှိုင်သာယာမှာ အခြေချ၊ ဓာတ်ပုံဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဓာတ်ပုံကိုဝါသနာဆိုတာထက် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုအဖြစ်ပဲ လုပ်ကိုင်သွားဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပြီးပေမယ့် ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်ပဲ ရပ်တည်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တယ်။ ဆုတွေရခဲ့တယ်။ ဒီထက်ပိုတဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို သူ့ဘာသာသူရှာ လို့ရတဲ့နေရာ တွေ့သွားတယ်။ အဲဒါက မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်သုံးရလာတာပါပဲ ။
“ ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေ လိုက်ရှာတယ်။ ပုံတွေ ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တယ်။ ကျွန်တော်အခုလို ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကလည်း အင်တာနက်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေပါတယ်။အင်တာနက် ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ တနေကုန်ထိုင်ဖတ်တယ်။ စပြီးနိုင်ငံတကာဆုရခဲ့တာ ကိုရီးယား Saloon ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ရခဲ့တာ၊ ပိုက်ဆံတော့မရဘူး၊ ဆုတံဆိပ်ပဲရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော့်မိသားစုပုံလေးနဲ့ ရခဲ့တာ၊ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဆုတွေဆက်တိုက်ရခဲ့တယ်” လို့သူက နိုင်ငံတကာဆုခြေလှမ်းအစကို ပြောပြပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လုပ်တဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လုပ်တဲ့ပွဲမှာ ပထမဆုံးဆုကြေးပါတဲ့ ဆုရခဲ့တယ်။ အဲဒီပုံကတော့ ဦးပိန်တံတားမှာ ကွန်ပစ်တဲ့ပုံနဲ့ရခဲ့တာ”လို့ ဆက်ရှင်းပြပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်က နိုင်ငံတကာဆုတွေ ရခဲ့တဲ့ငယ်ဘဝမှာ ပြည်တွင်းဓာတ်ပုံဆရာ တွေရဲ့ပုံတွေကို အတုယူပြီး ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ထပ်ပြောပြပါတယ်။ ပြည်ပအမြင်နဲ့မတူတဲ့ မြန်မာ့ရှုခင်းပုံတွေက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာစေပါတယ်။ အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးထဲက တစ်ခုကို အခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။
“ အင်းလေးမှာ သွားရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံ အင်းရေပြင်ထဲ နေရောင်ထိုးတဲ့အချိန် ရေငွေ့တွေကပြန့်နေပြီးတော့ ရေပြင်ကြီး တစ်ခုလုံးဝါနေပြီး အရမ်းလှတဲ့ပုံကိုတွေ့ရတာ။ အဲဒီမှာ ချက်ချင်းရိုက်လို့မရခဲ့ဘူး။ ဘာမှပြင်ဆင်မ ထားတဲ့အတွက် ။ နောက်နေ့မနက် ဒီလိုဖြစ်ပါ့မလားစောင့်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ။ အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ မနက်ကျတော့ အဲဒီလို ရေပြင်မှာထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ခေါ်ထားတဲ့ ငါးဖမ်းသမားတွေခေါ် Setting လုပ်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ လာတည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကလည်း ရေပြင်ပေါ်က တံတားလေးရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ High Angel ပုံတွေရတယ်။ အဲဒီပုံနဲ့ဆုတွေ ၁၀ ခုကျော်ထက်ရတယ်။ အဲဒီပုံကတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် ကျွန်တော့်တို့မတိုင်ခင်က ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူး” လို့ ဂုဏ်ယူစရာဓာတ်ပုံအကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီဖန်တီးခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် တော်တော်ချိုမြိန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ ကင်မရာ လေးတွေအကြောင်းလည်းပြောပြတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစကိုင်ဖူးတာက မဲပေါက်လို့ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ Digital Camera ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဆုရပုံတွေကို Volting ပေးပြီး Vote ပေးသူကို ကင်မရာကံစမ်းမဲဖောက်ပေးတော့ သူက ဆုရတဲ့ ဆုကို အလိုက် ပေးပြီး NIKON D 200 ကင်မရာကို ဝယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ အခုတော့ Fuji ရဲ့ တရားဝင်မြန်မာပြည် Brand Ambassador အဖြစ်ရော X Photographer အဖြစ်ပါ အခုအချိန်ထိရပ်တည်နေပါပြီ။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတကာက မြန်မာပြည်ကို ပို စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့အချိန်မှာ အွန်လိုင်းကတဆင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွား ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Luminous Journey နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Photo Tour Guide အဖြစ်ပါရပ်တည်နေတာပါ။ မကွေးရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာ ကင်မရာကို တစ်ခုချင်းဖြုတ်ပြီး ဓာတ်ပုံအကြောင်း မသိ ကလိခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က နိုင်ငံတကာ ထိပေါက်ရောက်တဲ့ ရှုခင်းတွေကို ကမ္ဘာကြီးကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ အေးချမ်းနေစေပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကသူ့အတွက်ပြီးခဲ့ပေမယ့် လေ့လာစရာတွေက တော့ လေ့လာလို့မကုန်နိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ လူငယ်တွေ စကားလက်ဆောင်တွေ အများကြီးလို့ တော့ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဓာတ်ပုံ Tour က အရမ်းကောင်းတယ်။ ပုံမှန် Tour Guide ထက်ပိုပြီး ဝင်ငွေပို ကောင်းတယ်။ တချို့က ပုံမှန် Tour Guide ကနေ ပြောင်းပြီး ဝင်လုပ်ကြတာရှိတယ်။ ဘာကိုလုပ်သင့်တယ်။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုက ဘာတွေ တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ ပိုဆိုးတာက တရုတ် Tour တွေဝင်လာတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့ အများအမြင် မသင့်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာတွေရှိကာ ကိုယ့်လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေပါသိဖို့လိုတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံမှန် ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံနေရာတွေ နည်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း သူက အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာပါ။ ခရီးသွားအပြင် ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အခက်အခဲကိုပြောပြပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်ဝင်းကတော့ ပုံမှန်ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေအပြင် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း ရှေ့ဆက် ပြီးပြိုင်သွားဦးမှာပါ။ လေ့လာစရာက မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်ကို လည်း ရိုးရိုးလေးခံယူပြီး ပြောပြပါတယ်။
“ ဘဝက တိုတိုလေး ။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကို တခြားသူကိုလည်း မထိခိုက်ဘဲလုပ်ခွင့်ရနေတာပါ။ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုချစ်တယ်။ ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ရိုက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ တကယ်တတ်ချင်ရင် သင်တန်းတွေတက်တာအပြင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာက အများကြီးကျယ်ပြန့်တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရိုက်နေကျကနေ ကွဲထွက်ပြီး ရိုက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်။ အဲဒီ အတွက်လေ့လာရဦးမယ်”လို့ ကိုကျော်ကျော်ဝင်းက ဓာတ်ပုံသမားအဖြစ် ရပ်တည်သွားမယ့် ခံယူချက်ကို ပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တာအပြင်စာရေးတာပါဝါသနာပါတဲ့ သူကဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Page မှာ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆုရပုံတွေအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ ဆုရပုံများရဲ့နောက်ကွယ်ဆောင်းပါးတွေက ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်အများစုအတွက် သဘောကျစရာပါ။ ဖတ်လို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဝင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူရဲ့ပုံတွေနဲ့တကွတင်ထားတဲ့ https://www.facebook.com/xpotographer/ မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လည်း ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Next articleDomestic Steel Producers Struggle from Foreign Competition